Khudaarta cagaaran | January 2020
Baradho macaan waa warshad kuleyl ah oo dhadhaminaysa sida barafka macaan. Inkasta oo ay asal ahaan ka soo jeedaan koonfurta, waxay si fiican ugu riixday hareeraha dhexe. Inta lagu jiro koritaanka, waxay ku faaftaa dhulka, sida geedka canabka ah, oo ka dhiga kalo xoqan. Waa digriiga waana la soo ururin karaa, cunto karisna karaa.
Daawada dabeecadda, waxyeelada iyo sifooyinka alaabta
Karootada waa khudrado aad u caan ah kaas oo si ballaaran loogu isticmaalo karinta adduunka oo idil. Karootada waxaa lagu daraa saladh, maraq, bariis, maraq khudradeed. Laga soo bilaabo iyada casiir, taas oo ah labaad ee ugu caansan ka dib markii yaanyo. Marka laga soo tago codsiyada culus, dabacasaha waxaa loo isticmaalaa in lagu xoojiyo jirka, maadaama ay leedahay sifooyin faa'iido leh kuwaas oo gacan ka geysanaya tan.
Pasternak ee hantida iyo muuqaalka waxay la mid tahay karootada, kaliya waa caddaan waxayna ka kooban tahay nafaqooyin dheeraad ah. Waxa kale oo uu leeyahay saameyn bogsashada inta lagu jiro xanuunka caloosha, waxay kicisaa cuntada, waa duri ah. Waxay ka nastaa dhagxaanta kaadiheysta iyo kelyaha, waxay yareyneysaa qufaca, daaweyneysa cudurrada cudurada haweenka iyo dhibicda.
Noocyada dhirta caanka ah oo leh sharaxaad
Maanta, malaha, waxaa jira beerta sida in dhirta aan korin lahaa. Dhirta caleemaha iyo xididdada ayaa si siman waxtar u leh. Labadaas iyo mid kale ayaa loo isticmaalaa cuntada, iyo sidoo kale ujeedooyinka caafimaadka iyo qurxinta. Noocyada ugu wanaagsan ee dhirta ka fiirsan maqaalkan. Noocyada ugu wanaagsan ee dhir caleen ah Parsley waa geedo basbaas ah ee dalladda qoyska.
Agrotechnics ku beerista ubaxyada laga bilaabo abuurka beerahooda
Kobcinta gowsaha ee qorshahaaga ma dhicin wax dhibaato ah. Dalagga geedka asaasiga ah ma aha mid xamaasad leh wuxuuna bixiyaa dalagyo waaweyn. Maanta labadaba miiska iyo calafka labka ah ee bagalka ayaa koray. Doorashada goobta iyo carrada loogu talagalay gawracsashada Waxay doorbidaan heerkulka dhexdhexaadka ah iyo kuleylka xoogga leh kaliya waxay dhaawici doonaan. Sidaa darteed, for rootka ku haboon ee leh penumbra, sidaas darteed inta lagu jiro kulaylka waxaa laga ilaaliyey qorraxda.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Khudaarta cagaaran 2020